Coconut Oil - Impilo nobuhle kuzo zonke iconsi.
Uthi bewazi nje ukuthi kule planethi kukhona ithuluzi eliyingqayizivele okungukuthi eliphumelelayo rejuvenation, impilo ngcono kanye nokulondolozwa ubuhle, ukuncipha emzibeni, ukwelapha izifo eziningi, futhi nje ukumamatheka ezimhlophe? Yinto ebalulekile isimangaliso - uwoyela kakhukhunathi. Wayengubani eThailand, ngabona Smiling abelungu-toothed Thai abanesikhumba ephelele futhi izinwele langa. Iqiniso ukuthi Thais zisebenzisa amafutha kakhukhunathi cishe noma kuphi - ukunakekelwa isikhumba, ukuqothuka kwezinwele, ekuphekeni, ukwelashwa kanye nokuvimbela yilanga kanye nje ukuze ujabulele isikhumba Velvety kanti iphunga.
uwoyela kakhukhunathi kuyinto engenakuqhathaniswa ngenxa yokuba jikelele walo nanoma yimuphi yemvelo, futhi uzuze ngokwengeziwe nge umkhiqizo yezimonyo. Ukuze uthole isamba encane, ungathola cishe nezilandiso amafutha okuthambisa imaski ku nezinwele kanye nokwelashwa izinwele, a kwalokho emangalisayo baking ngisho izindlela ukuba bushelelezi, tan enhle. Futhi ukuthenga uwoyela kakhukhunathi ayisekho inkinga. Futhi manje konke ukuze.
uwoyela kakhukhunathi ekuphekeni.
uwoyela kakhukhunathi yengezwe amasaladi, esetshenziselwa ukulungiselela ukudla njalo nokudla, kanye nokusetshenziswa ngefomu okumsulwa. EQueensland wake wafunda ukwakheka kanye isinyathelo amafutha emzimbeni womuntu. Ngenxa yalokho, ososayensi batholé ukuthi amafutha kakhukhunathi ngokushesha futhi angabacwasi esikuthola kalula umzimba, kodwa hhayi zibekwe amakhilogremu ngokweqile futhi isheshisa umzimba futhi kusiza kwesisindo muhle. La mafutha esihlahla okuboniswe Alzheimer kungenalo ukuthuthukiswa sifo kunomthelela ukululama ngokushesha zomzimba.
With ukusetshenziswa njalo amafutha kakhukhunathi kusiza sikashukela - ke normalizes ukukhiqizwa insulini futhi ukunika amandla. ewusizo kakhulu amafutha kakhukhunathi abantu ngamafutha isifo senhliziyo kwehlisa cholesterol, okuyinto nokuvimbela best of ukumelwa inhliziyo nokushaywa unhlangothi. uwoyela kakhukhunathi ukubhubhisa namagciwane abangela izifo nama-virus. Ngokwesibonelo, kungase kuthathe kwengxenye isipuni phakathi Umkhuhlane kubhubhane futhi ekwelapheni caries. Uma Hlambulula umlomo wakho ngamafutha njalo ekuseni imizuzu 15-20 ke ekugcineni olungathunaza amagciwane izinyo abhashe, amazinyo akho iyoba mhlophe kakhulu futhi enamandla, futhi enye plus abalulekile - isikhathi eside walondoloza ukuphefumula fresh, kungakhathaliseki ukuthi babe namazinyo ogulayo.
uwoyela kakhukhunathi isikhumba.
uwoyela kakhukhunathi ingasetshenziswa ifomu okumsulwa, noma njengendlela base okwesikhathi ukhilimu noma namafutha. Ngenxa eminingi equkethwe kuwo amavithamini nezakhi ezondla umzimba, isikhumba moisturized futhi ahlanzekile ngokuphelele. impahla uwoyela elwa namagciwane ikuvumela ukuba ngokushesha balahle induna, ububomvu nokuxebuka. Ingasetshenziselwa ngoba ukushuka, isikhumba amafutha kanye makeup remover, njengoba lisetshenziswe futhi esikhundleni ukhilimu evamile. uwoyela kakhukhunathi ikhuthaza ukukhiqizwa collagen esikhumbeni, ukuze futhi kumele kusetshenziswe ukuze kuqedwe imibimbi kanye nokuvinjelwa.
Coconut uwoyela izinwele.
Coconut uwoyela ngokushesha aqede dandruff, kuvimbela nezinwele, sivuselela isakhiwo sabo futhi kuqinise follicle futhi izimpande. It is kahle amuncwa izinwele, ngemva kokusebenzisa indlu izinwele akuyona okunamafutha, acwebezelayo futhi silky.
uwoyela kakhukhunathi ingasetshenziswa ngokungeza lesisekelo izinwele ukunakekelwa, noma ukuba ifomu okumsulwa.
Wena ezempilo nobuhle.
Izakhiwo ewusizo uwoyela imbewu yamagilebhisi. Izibuyekezo